बि.सं.२०७३ साल कार्तिक २७ गते शनिवारको राशिफल
Saturday 17th of November | २०७५ मङ्सिर १ शनिबार
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७३ कार्तिक २७ शनिबार |
आजको पञ्चाङ्ग –
नेपाली मितिः वि.सं. २०७३ । नेपाल सं. ११३६ । योग सं. ३७ । कार्तिक महिनाको २७ गते शनिवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१६ नोभेम्बर महिनाको १२ तारिख ।
योगः बज्र योग, ११:०९ बजेपछि सिद्धि योग ।
तिथीः शरद् ऋतु कार्तिक शुक्लपक्षको त्रयोदशी तिथी ।
नक्षत्रः रेवती, २०:४६ बजेपछि अश्विनी ।
करणः कौलव १३:३७ बजेसम्म उपरान्त तैतिल करण ।
चन्द्रमाः मीन राशिमा, २०:४६ बजेपछि मेष राशिमा ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०६:२३ बजे ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १७:११ बजे ।
राहुकालः ०९:०५ बजेपछि १०:२७ बजेसम्म ।
यात्राः उत्तर दिशाको लागि उपयुक्त ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन कार्यक्षेत्रमा अल्लि बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । शुरुमा केही अपजश पनि खेप्न नपर्ला भन्न सकिन्न तथापि केही संघर्षको बाबजुत पनि अन्त्यमा परिणाम सुखद आउने छ । खर्चको मात्रा भने बढ्ने नै देखिन्छ । व्यवहारिक औपचारिकता निर्वाह गर्नपर्ने भेट्घाट आदि पक्षमा दानदातव्य, सहयोग गरेर खर्चको सदुपयोग गर्नु उचित हुनेछ । आज यहाँलाई कुनै मातृशक्तिको सहयोग मिल्नसक्ने छ । त्यस्तै ३ अंक र पहेंलो रङ्ग यहाँलाई आज शुभ हुनेछ भने परोपकारले सन्तोष दिनेछ । साथै आज यहाँले अढैया शनिको दुष्प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न शनिमहामृत्युञ्जय पाठ वा शनिमहाँकाल दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आज प्रतिस्पर्धामा विजय र प्रख्याति मिल्ने दिन छ । पेशा तथा व्यवसायिक कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने छ । अध्यनअध्यापन एवं सन्तानको पक्षबाट पनि सन्तोष लिनसकिने छ । दिनको सदुपयोग गर्ने र अधुरा रहेका कामहरुलाई पूर्णता दिने गरी स्वकार्यलाई समय दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । विवाह योग्य युवायुवतीको विवाह प्रसङ्ग चल्नसक्ने सम्भावना पनि छ भने प्रेमाभिलाषिहरुको लागि प्रेमसम्बन्ध जोडिनसक्ने पनि सम्भावना छ । आज यहाँलाई दुई अङ्क, सेतो रङ्गको उपयोग फापकर हुनेछ भने भगवान हनुमानदेवको भक्ति विशेष फापसिद्ध हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अपेक्षित उपलब्धि हुननसके पनि जनसंपर्क बढ्ने र तुलनात्मक रुपमा केही सहजवातावरण सृजना हुनेछ । कामकार्य तथा पेशा वा व्यवसायको क्षेत्रबाट आंशिकलाभ पनि हुनेछ । जसले गर्दा केहीहद्सम्म मानसिक सन्तुष्टि मिल्ने र साहस बढेर आउनेछ । तुरुन्तै फल प्राप्त गर्न नसकिएपनि केही महत्त्वाकांक्षी योजनाको बारेमा मानसिक चिन्तन तथा सरसल्लाह एवम् विचारविमर्श हुनसक्नेछ । मानसम्मान पाइने र भविष्यको लागि आश्वासन पनि मिल्नसक्ने छ । आशा गरेकै जति नभएपनि औकात अनुसारको पदप्रतिष्ठा र जिम्मेवारी मिल्नसक्ने छ । आज यहाँलाई गुरुजनको आर्शिवाद लिएर अघिबढ्नु शुभकर हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अपेक्षा गरिएकै कार्यमा सफलता पाउन अल्लि गार्हो पर्ने देखिएको छ । तथापि धार्मिक–आध्यात्मिक एवं सत्चिन्तन हुनगइ मानसिक शान्ति मिल्नसक्ने छ । सामान्यतया दैनिक एवं व्यवहारिक कामकार्यमा केही लाभ हातपार्न सकिने छ । उच्चवर्गसँग संपर्क जोडिने र भावनात्मक महत्त्वाकांक्षा बढ्नसक्ने छ । जिम्मेवारी एवं मनोबल उच्च हुनेछ । प्रेमसम्बन्धले उचाइ लिनेछ भने विवाह प्रस्तावले प्रसय पाउने छ । आज यहाँको लागि नौ अङ्क, पहेंलो रङ्गको प्रयोग र बढी चाहना गरिएको कार्यमा सफलताको लागि भगवान भैरवदेवको श्रद्धाभक्ति एवं दर्शन फलप्रद हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन विपरित महसूस हुनसक्ने छ । बोलिचाली एवं जनव्यवहारमा सोँचविचार र सावधानी अप्नाउनु उचित हुनेछ । व्यवसाय तथा कर्मक्षेत्रमा बाधा अड्चन परिशानीजन्य स्थिति सृजना हुनसक्ने गोचरको प्रभाव छ भने अपेक्षित एवं प्राप्त आश्वासन पूरा हुन कठिन पर्नेछ । स्वास्थ्यमा पनि समस्या रहनसक्ने छ, हृदयका दीर्घरोगीहरुले विशोष ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । उपर्युक्त संघर्ष एवं प्रतिकूलताको बाबजुत खासै सोँचविचार नभएको काम बनेर केही राहत भने मिल्नेछ । आज यहाँले गुरुजन तथा इष्टदेवको श्रद्धाभक्ति बढाउनु शभदायक हुनेछ । अढैया शनिले आक्रान्त तपाईले आज शनिदेवलाई खुशी बनाउने कुनै उपाय अवलम्बन गर्नु शुभदायक हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन सांसारिक एवम् भौतिक सुखपूर्ण रहनेछ । व्यापार व्यवसाय आदिबाट राम्रो आर्थिक लाभ गर्न सकिनेछ । भने विभिन्न खालका उपलब्धि हातपर्ने छ । आफन्तजनको सहयोग मिल्ने हुनाले भावि कार्यको लागि हिम्मत तथा साहस बृद्धि हुनेछ । दाम्पत्य तथा पारिवारिक दिनचर्यामा सुधार आउनाले मानसिक शान्ति महसूस हुनेछ । यात्रा, मनोरञ्जन एवम् सांस्कृतिक परिवेशको वातावरणसँग पनि नजिक हुन पाइएला । आज यहाँलाई सात अंक, सेतो रङ्ग अनुकूल रहने छ भने नवदम्पतिलाई उपहार दिनुले प्रतिष्ठा बढाउनेछ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आज केही पराक्रम बढ्ने दिन रहेको छ । तथापि मुख्य एवम् महत्त्वपूर्ण काममा संघर्ष देखिएको छ, जस निवारणको लागि गुरुजनको आर्शिवाद लिनु वा विद्वानजनलाई खुशि बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । बाँकी गोचर स्थिति अनुकूल नै छ । शारीरिक बल बढ्ने, शत्रु मुकाविलामा वियजी भइने, आँटेताकेको काम अगाडि बढ्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसाय तथा पेशाकर्ममा सफलता र लाभ मिल्ने छ । समर्थक बढ्नेछन् । यात्रा योजनाको पनि सम्भावना देखिएको छ । घमण्ड नगर्ने र समयको सदुपयोगमा ध्यान दिने गर्नु आज यहाँको लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिनलाई सुधारोन्मुख त मान्न सकिन्छ । तरपनि कुनै कुनै क्षेत्रमा आक्रोश एवं रणनीतिक भूमिकाको चेष्टा हुनसक्ने छ । अध्ययन आदि प्राज्ञिककर्ममा सफलता एवं नीतिगत कार्यमा सम्मान पनि नमिल्ला भन्न सकिन्न । कुट्नैतिक कार्य तथा प्रस्तुतिमा सफलता र प्रशंसा पाइने छ । अदृष्य समस्या आइपर्ने र समयको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने डर पनि देखिएको छ । सैद्धान्तिक छलफल र अर्तिउपदेश जन्य वातावरणको संयोग जुट्न सक्नेछ । कसैकसैलाई सन्तानको बाटोबाट चिन्तित हुनपर्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न । आज यो राशि हुनेहरुले साढेसाती शनिको दुष्प्रभाव न्यूनिकरणको लागि शनिदेवलाई खुशी बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुको साथमा भैरवदेवको स्तुति गर्नु विशेष हितकर हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन बोली व्यवहारमा सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिएको छ । वादविवाद तथा मनमुटाव जन्य अवस्थाको सामना गर्न पर्ने सम्भावना देखिएकोले होसियारी रहनुजरुरी हुनेछ । मानसिक संकिर्णता बढ्नसक्ने र स्वास्थ्यमा पनि केही ह्रास आउनसक्ने छ । थप पारिवारिक समस्यासँग मुकाविला गर्नपर्ने र आँटेताकेको काममा विलम्ब हुने तथा अल्लि बढी प्रयन्त गर्नपर्ने ग्रहगोचरले संकेत गरेको छ । आज यहाँको लागि चार अंक, सेतो रङ्गको उपयोग शुभ हुनेछ भने साढेसाती शनि शान्तिको लागि उपयुक्त उपायको अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सकारात्मक मान्न सकिन्छ तथापि मुख्य एवम् महत्त्वपूर्ण कामकार्यमा केही समस्या भने झेल्न पर्नसक्ने छ । केही बाधाब्यावधानको बाबजुत पनि काम गर्ने शारीरिक जोशजाँगर एवम् आँटसाहस बढ्ने नै देखिन्छ । केही नयाँ उद्यमहरु सम्पादन गर्ने जमर्को हुनेछ भने दैनिक रुपमा चलिरहेको कामकार्य स्वभाविक रुपमा अघि बढ्ने छन् । पेशा तथा व्यवसायबाट ठिकै आर्थिक लाभ पनि गर्नसकिने छ । शुभचिन्तक बढ्ने देखिन्छ । दाजुभाईबीचको सम्बन्धमा पनि सुधार आउनसक्ने छ । विशेष काममा आउने अबरोध तथा बाधाब्याबधानलाई हटाउन गुरु बृहस्पतिका प्रतिक गुरुजन वा विद्वान मान्यजनको सेवाश्रद्धा गर्नु र आर्शिवाद लिनु फापकर हुनेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन धनवृद्धियोग परेको हुनाले व्यवसायिक धन्दा बढ्ने र धनसम्पत्ति सञ्चय गर्न सकिने छ । मनोनुकूल भोज्यवस्तु प्राप्ति हुनेछ । कुटुम्बको सेवा गर्ने मौका मिल्नसक्नेछ । शिक्षण, संभाषण, प्रवचन आदि वाकवृति हुनेहरुको लागि दिन विशेष अनुकूल रहनसक्ने छ । बोलीवचनबाट मान्छेहरुलाई प्रभाव पार्न सकिने तथा समर्थन मिल्ने हुनाले मन खुशी एवम् आनन्दित रहनेछ । समाज सेवाजन्य कार्य तथा संघसंस्था आदिको कार्यक्रम आदिमा सहभागी हुन पाइनसक्ने छ । परोपकार एवम् दानदातव्यजन्य आदिकार्यमा पनि आज यहाँको मन जानसक्ने छ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन यश–कृति र सन्तोष एवम् शान्ति मिल्ने छ । मानसम्मान, पदप्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुनेछ । स्वादिष्ट परिकारको भोजन मिल्नाले सौहार्दता र प्रसन्नता छाउनेछ । स्वकर्म एवम् व्यवसायिक क्षेत्रबाट लाभ तथा सफलता मिल्ने देखिएको छ । मनोकूल वातावरण बन्नाले आत्मिक सुख एवम् सन्तोष बढ्नेछ । नयाँ कार्य वा लगानीको लागि प्रस्ताव पनि आउनसक्ने छ भने सामाजिक कार्यमा सरिक हुनपाइने सम्भावना पनि देखिएको छ । आज यहाँको लागि एक अङ्क, रातो तथा हरियो रङ्गको प्रयोग र भगवान माँ जगदम्बाको स्तुति शुभकर हुनेछ ।
आज जन्म दिन पर्ने सबैलाई न्यूज अभियान डट् कम परिवारको तर्फबाट सुस्वाथ्य एवम् दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना ....। एप मार्फत एंड्रोईड मोबाइलमा राशिफल हेर्नका लागि : Download Link : https://goo.gl/29PZux
बि.सं.२०७५ साल भाद्र ९ गते शनिवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल भाद्र ८ गते शुक्रवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल भाद्र ७ गते बिहीवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल भाद्र ६ गते बुधवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल भाद्र ५ गते मङ्गलवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल भाद्र ४ गते सोमवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल भाद्र ३ गते आइतवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल भाद्र २ गते शनिवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल भाद्र १ गते शुक्रवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण ३१ गते बिहीवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण ३० गते बुधवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण २९ गते मङ्गलवारको राशिफल राशिफल
पुरानो गुह्ेश्वरीलाई चित्रमा उतार्न ‘कला कार्यशाला’
‘ए’ डिभिजन लिग ः मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब विजयी
जीप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, १७ घाइते (घाइतेको नाम सहित) - अपडेट
नेपालगञ्ज शहर ‘नो हर्न’ घोषित
विद्युतीय हिटरबाट आगलागी हुँदा आमासहित चार बच्चाको मृत्यु
विदेशीको स्वार्थभूमिमा परिणत श्रीलङ्का
सूर्य नेपाल सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सुचीमा
कर दिवसमा प्रभातफेरी